Tontolo iainana: mila fifanarahana iraisam-pirenena vaovao | NewsMada
Tontolo iainana: mila fifanarahana iraisam-pirenena vaovao
Par Taratra sur 30/09/2020
Nandray fanapahan-kevitra goavana ny filoham-panjakana miisa 65 sy ny governemanta maneran-tany, ny 28 septambra teo, mikasika ny tontolo iainana. Tafiditra ao anatin’ny drafitrasan’ny Firenena mikambana (ONU) mandritra ny 10 taona ho avy, hametrahana ny fampandrosoana maharitra izany.
Tanjona tamin’ity fivoriamben’ny Firenena mikambana ity ny hamadihana ny fahapotehan’ny tontolo mananaina hitondra fampandrosoana maharitra mba ho lovainjafy. Saika nifantoka tamin’izany avokoa ny kabarin’ny filoham-panjakana nandray fitenenana. Nilaza ny sekretera jeneralin’ny ONU, i Antonio Gulterres, raha tiana ny hisian’ny fampandrosoana maharitra, tsy maintsy hatao ny fifanarahana sosialy vaovao hiantoka ny tetezamitan’ny angovo azo havaozina, ka tsy hisy intsony ny fiparitahan’ny etona karbona amin’ny taona 2050. Angatahiko ny firenena rehetra hampiditra paikady miisa enina mahomby ho an’ny toetr’andro amin’ny ezaka rehetra apetrany avy, hiarovana sy hanarenana ny toekarena. Ilaina ny fiaraha-mientan’ny rehetra ary tsy tokony hisy atao ankilabao. Mila velirano iraisam-pirenena vaovao isika.
Atsahatra ny trafika
Manoloana ireo, nilaza Ramahaleo Tiana, avy amin’ny WWF Madagasikara, fa “ho an’i Madagasikara, tsy maintsy afantoka amin’ny fiarovana maharitra ny faritra arovana ny ezaka atao, ary atao fototry ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny loharanon-karena voajanahary. Mila hatsahatra avy hatrany ny trafikana harena voajanahary amin’ny alalan’ny fampiharana ny lalàna. Mila tanterahina ny paikady mikasika ny famatsiana angovo avy amin’ny hazo ary tantanina mirindra sy maharitra ny harena voajanahary any amorontsiraka. Tokony ho lohalaharana amin’izany i Madagasikara”.